Degmada Kramfors waxeey soo bandhigeeysaa jawiga magaalo yar iyo dabeecad qurxoon. Halkaan waxaa ka dooran kartaa in aad dagto baadiyaha ama magaalada. Degmada waxeey ku taalaa meel fiican oo xeebta agteed, waxeeyna lee dahay jiq, buro, wabiyaal yar iyo bad. Dhaxalka-adumeed ee Höga Kusten oo degmada ku taalo waxeey sanad kasto soo jiidataa kumanaan soo booqdo degmada. Ku soo dhawaaw degmadeena amaanka, dhawaanshaha iyo baraarujinta leh!
Waxaa jiro guriyaal kala duwan oo laga kireeysan karo gudaha degamada Kramfors. Laga bilabaa guriyaal hal qol iyo jiko ilaa guriyaal ka weeyn oo leh lix qol iyo jiko. Shirkada degmada ee Krambo waxeey soo bandhigaa kartaa guryiyaal ku yaalo degmada oo dhan. Sido kale waxaa jiro mulkile-guri oo madaxbanaan oona kireeyo guriyaal.
Kramfors waxaa ku yaalo 300 oo ururo, oo aad adiga ku soo dhawdahay in aad qeeyb ka noqoto. Waxaan lee nahay ururo-isboorti oo badan, laga bilaabaa dabaal ilaa culus-qaad. Kaniisada Iswiidhan wee ku taalaa tuulooyinka badankood. Meelaha dhaw waxaa ku yaalo kaniisado madax banaan sidii EFS, kaniisada bingist, ururka diimeed ee babtist, shuhud yaho iyo ururka dineed ee faafinta. Masaajid waxuu ku yaala Sundsvall, urur islameed waxuu ku yaalaa Härnösand. Kramfors waxaa ku yaalo urur dhaqameed cusub ee arimaha galmoodka kale.
Bartamaha Kramfors waxaa ku taalo maktabad oo aad halkaas uga toobaran karto ku hadalka luuqada iswiidhiska marar badan isbuuci. Sido kale maktbad waxeey ku taala Ullånger iyo Nordingrå. Sido kale waxaa jiro bas-bugeed oo wareega degmada, ka fiirso waqtiga-bosteejada halkaan.
Bartamaha Kramfors waxeey lee dahay soo bandhigid balaraan ee dukaamada iyo carawada Christoffer. Kramfors markii laga gudbo, degmada waxeey lee dahay 16 xaafado. Ullånger, Nyland iyo Bollstabruk waxeey lee dahay adeeg dhaw oo fiican. Xaafadaha ka sii yar waxaa ku yaalo dukaamo iyo maqaayado. Kramfors waxaa ku taalo dukaamo-gacan-labaad ah oo badan.
Dugsi xanaanada ee Kramfors waxuu lee ahay tayo sareeyso xagga xanaanada iyo waxbarashadaba.
10:ka dugsiyasha hoose ee degmada, waxaa ka mid ah iskuulka cusub ee Skarpåker oo ku yaalo bartamaha Kramfors.
Degmada Kramfors waxeey lee dahay labo dugsi sare. Dugsiga Ådal ee gudaha xaafada Kramfors iyo Dugsi sare Räddning ee gudaha Sandö. Sido kale degmada Kramfors waxaa ki yaalo dugsi sare oo madax banaan, Dugsiga sare Naturbruk Nordvik.
Haddii aad ka diiwan galsan tahay Kramfors, oo ee san luuqada iswiidhiska ee san eheeyn luuqadaada koobad, waxaad heli kartaa waxbarashada asaasiga ee luuqada iswiidhiska adigo dhiganaayo waxbarashada iswiidhiska ee soo galooytiga, sfi. Markii aad dhiganeeyso sfi waxaad lagu baraa asaaska luuqada iswiidhiska, heerka waxbarashadana waxaa la waafajinayaa herkaada. Degmada waxeey soo bandhigeeysaa dhowr waxbarasho ee dadka waa weeyn. Sido kale Kramfors waxaa ku yaal Träakademien oo soo bandhigaayso barnaamij waxbarasho sare ee dhinaca farshaxanka alaabta guriga iyo dhismaha. Dugsi dadka waa weeyn ee Hola gudaha degmada ayuu ku yaala.
Gudaha Kramfors, Nyland iyo Höga Kusten waxaa ku yaalo xarumo-caafimad. Xarunta-reerka waxeey ku taala Bruksgatan 12, gudaha rugta caafimaadka Kramfors. Daryeelka ilkaaha ee dad weeynaha waxaad ka heleeysa Limstagatan 9. Isbitaal waxuu jiro 35-40 oo baabuur ama tareeyn.
Xariir-tareen ayaa lagu tagi karaa, loogana imaan karaa Kramfors, ayadoo ee wadada Botnia ee marto halkaan, Umeå iyo Örnsköldsvik ee dhinaca waqooyiga iyo Härnösand iyo Sundsvall ee dhinaca koonfurta. Nyland waxaa ku taalo Madaarka Höga Kusten. Madaarka oo leh boosteejo-tareen oo gaar ah, maalin kasto waxaa ka baxo diyaarado tago Stockholm iyo Gällivare. Wadada 90ka waxaa maro gaadiid-bas ee guud, taasi oo keeneeysoo in ee sahasho tareen raacida ku socto shaqada iyo iskuulka ku yaalo Sollefteå, Örnsköldsvik iyo Härnösand.
Kramfors waxaa ku yaalo shirkada badan oo kala duwan, laakin warshadeeynta waraaqadaha iyo miinshaarta ayaa mudo dheer asaas uu aheeyd jariga ganicsiga shirkadeed ee Kramfors. Shaqo dhiibe weynwaa Mondi Dynäs oo sameeyo waraaqado. Shaqo dhiibo kale oo weeyn waa Gerdins i Mjällom, oo ah shirkad nidaam iyo tafaariq geeyso ee xagga tafaariiqda-hubaalka ee wasladaha birta, shaqeeyeeynta jarida birta iyo isku xidhka qeeybaha uu sheey ka kooban yahay. Shirkadaha adeega , Folksam ayaa weyn ayadoo leh iibsiyeenta-telefooneed. Shaqo dhiibaha ugu weeyn degmada waa Degmada Kramfors oo leh 1700 oo shaqaale.
Handläggare inom säkerhet i fält Utbildningshandläggare
Arbetsledare vatten och avlopp Arbetsledare, anläggning
Lärare i kreativt skrivande till Hola folkhögskola Folkhögskolelärare
Språklärare till Turismutbildning Folkhögskolelärare
SOCIONOM TILL SKYDDAT BOENDE FÖR KVINNOR Behandlingsassistent/Socialpedagog
Personlig assistent till ung kille i Skog Personlig assistent
Rörläggare vatten och avlopp Underhållstekniker, vattenrening
Kundrådgivare som älskar försäljning! Kundtjänstmedarbetare
Industrielektriker till SCA Wood Bollsta sågverk Industrielektriker
Sjuksköterska sökes till vackra Örnsköldsvik! Sjuksköterska, grundutbildad
Teknisk projektledare Kvalitetsingenjör/-tekniker, elkraft
Eventsäljare till Lars Winnebäck , 28 juli Eventsäljare/Eventförsäljare
Vill du ha flexibla arbetstider då har vi säljjobbet för dig i Kramfors. Hemförsäljare
Kantor 100% - vikariat Kantor
Präst till Höga Kusten Komminister
Personliga assistenter sökes till nytt uppdrag i Kramfors Personlig assistent
Förskollärare grundsärskolan Lärare i förskola/Förskollärare
Köksbiträde till Hola folkhögskola Köksbiträde